WorldRemit oo bilowday in lacagaha toos loogu diro Zaad | Salaan Media
WorldRemit oo bilowday in lacagaha toos loogu diro Zaad
WorldRemit ayaa bilowday adeeg cusub oo dadka reer Somaliland ee qurbaha jooga u suuragelinayaa in ay ehelkooda dalkii jooga lacagaha toos ugu diraan Zaad-ka. Qofkla lacagta dirayaa isaga oo gurigiisa jooga ayuu inta u dhexeysa $1 ilaa $2,500 toos ugu shubi karayaa Zaad-ka. Waxa qofka lacagta dirayaa u baahan yahay oo keliya computer ama telefoon Internet leh.
Adeeggani waxaa uu khaasatan dadka u sahlayaa dirista lacagaha yaryar ee sida fidrida, xaqal ciidka iyo wixii la midka ah. Qofku isaga oo guriigisa jooga ayuu $5 iyo wax la mid ah toos ugu diri karayaa dadka ehelkiisa ah ee waddankii jooga.
Adeeggani waxa uu gebi ahaanba meesha ka saarayaa wakiilkii lacagta laga diranayey iyo kii laga qaadanayeyba oo dadka lacagta dira iyo kuwa loo diraba wakhti badan kaga lumi jiray.
WorldRemit oo lacagaha kasoo dirta 32 waddan, waa shirkadda ugu weyn adduunka ee qaab-ka online-ka ah wax u dirta oo in ka badan 100 waddan lacagaha gaadhsiisa. WorldRemit waxay toos lacag ugu dirtaa adeegyada mobile money transfer-ka ee GSMA u aqoonsatay in ay yihiin kuwa ugu horreeya adduunka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin MPESA (Kenya), Zaad (Somaliland), GCash (Philippines), Smart (Philippines), Easy Paisa (Pakistan), EcoCash (Zimbabwe) iyo MTN (Ghana).